masoivoho eTN hiteny ao amin'ny Kongresin'ny fizahantany Zagreb
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » masoivoho eTN hiteny ao amin'ny Kongresin'ny fizahantany Zagreb
Srilal Miththapala, Filoham-pirenena taloha ao amin'ny Association Hotel Hotels any Sri Lanka ary masoivohon'ny eTN, dia nasaina ho mpikabary vahiny amin'ny fankalazana ny Jobily an'ny Fikambanan'ny Mpampiantrano amin'ny fandraisam-bahiny Kroaty ny 23 sy 24 Novambra ao Zagreb, hatao ao amin'ny Sheraton Zagreb Hotel.
Ny Fikambanan'ny mpampiasa amin'ny fandraisam-bahiny any Kroasia dia fikambanan'ny hotely nasionaly izay manana mpikambana 90% ny trano fandraisam-bahiny ao Kroasia, ary koa ny sekoly fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, magazine ary kafe.
Ny kongresy maharitra roa andro dia hatao eo ambany fiahian'ny filohan'i Kroasia, ary hifantoka amin'ny fiomanana hiatrika ireo fanamby vaovao amin'ny fizahan-tany, ny fiatraikany amin'ny fiarahamonina, ary ny fomba tsy maintsy andraisan'ny governemanta andraikitra amin'ny famoronana fiainana maharitra ho an'ny olom-pirenena ny mariky ny toerana sy ny mpizahatany ihany koa.
Srilal, izay CEO an'ny Vondrona Serendib nandritra ny 10 taona, ary avy eo nitarika ny tetikasan'ny Chamber of Commerce tena nahomby, tetik'asa EU SWITCH ASIA Greening Hotels, dia handray ny traikefany mivelatra amin'ny asa sy ny fampandrosoana maharitra ny fizahan-tany amin'ny fizahan-tany ny adiresiny.
Barcelona dia mandray ny kongresin'ny World City Expo tsara indrindra hatramin'izay
Fihaonamben'ny fizahan-tany maharitra maharitra: i Jamaika dia efa handeha avokoa